Khasaare xoogan oo ka dhashay dagaalkii Kismayo, iyo xaalad cabsi leh oo wali ka taagan. – Radio Daljir
Oktoobar 1, 2009 12:00 b 0
Kismayo, Oct 01 – Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo oo ay maanta ku dagaallameen ururrada Al-shabaab iyo Xisbul-Islaam, ayaa sheegaya dagaalladaasi in ay ka dhasheen khasaarooyin xooggan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira.
Dagaalka oo ahaa mid la isku adeegsaday hubka nooyadiisa kala duwan ayaa si siman u saameeyey dhammaanba xaafadaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose, waxaana ka dhashay khasaarooyin naf iyo maalba iskugu jira oo soo wada gaaray dadka shacabka ah iyo kooxihii dagaalladu dhax-mareen.
Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya dagaallada saakay ka bilowday gudaha magaalada Kismaayo, waxaana qaar ka mid ah wararka aan halkaasi ka helayno ay sheegayaan in ay dagaalladaasi ku dhinteen in ka badan 10 qof, halka tiro ku dhow 60 qofna la sheegayo in ay dhaawacyo soo gareen, hase ahaatee ma jirto cid si rasmi ah u xaqiijin-karta dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay dagaalka Kismayo ee maanta.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay idaacadda Daljir khadka telefonka kula xiriirtay, ayaa sheegay in ay indhahooda ku arkeen dad dhintay iyo kuwo dhaawac ah oo loola sii cararayo goobaha caafimaadka ee ku yaalla Kismayo, hase ahaatee waxay sheegeen in aysan caddayn-karin tirada rasmiga ah ee dhimatay ama dhaawacmay.
Kooxaha maanta ku dagaallamay magaalada Kismaayo ee Al-shabaab iyo Xisbul-Islaam, oo aan la hadalnay saraakiil ka mid ah, ayaa midkastaabaa si gaar ah sheegtay in uu guulo waa-weyn ka gaaray dagaalkii maanta.
Warar aan ka helnay isla markaana aan ka xaqiijinay qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee magaalada Kismayo, ayaa tilmaamaya in ay ciidamada Xoogagga Al-shabaab ku arkeen Isgaysyo muhiim ah oo ku dhax-yaalla magaalada Kismaayo, waxayna intaasi ay ku dareen dhanka kale in ay arkeen gaadiidka dagaalka ee xarakada Al-shabaab oo gaaf-wareegaya qaar ka mid ah xaafadaha magaalada, inkastoo dadku ay maanta guryahooda ku sugnaayeen cabsida dagaalka darted.
Waxaana wali caddayn cidda awood roonaatay ama dagaalka ku gacan sarraysay hase ahaatee waxaa loo badinayaa Al-shabaab in ay qabsadeen meelo badan oo muhiim ah, oo ku yaalla magaalada Kismayo ee xiisadda cusubi hadda ka soo aloonsantay.
Xaaladda ayaa hadda la tilmaamayaa in ay deggan-tahay inkastoo ay halkaasi ka taagan-tahay cabsi iyo dhiilo colaadeed oo wal-walbadan ku abuurtay dadka shacabka ah eek u dhaqan magaalada Kismaayo..
M/weyne Rayaale iyo labada Guddoomiye ee axsaabta mucaaradka ah oo qalinka ku duugay heshiis.